Qalabka Caafimaadka Ee Covid Looga Baahan Yahay Guriga – WARSOOR
2. Betadine oo loogu talagalay dawo luqluqashada iyo luqluqasho
3. Vitamin C iyo D35. B adag
6. Uumiga + kaabsulka uumiga
8. Dhululubo ogsijiin ah (oo loogu talagalay xaaladaha degdegga ah oo keliya)
9. Jimicsiyada Neefsashada
Qeybinta Seddex marxaladood:
1. Ku fidi kaliya sanka – waqtiga soo kabashada waa maalin badhkeed. (Neefsashada uumiga), fitamiin C. Badanaa qandho malaha. Asymptomatic.
2. Kala qaybsanaanta cunaha – cuna xanuun, waqti soo kabasho 1 maalin ah (luqluqasho biyo kulul, biyo diirran oo aad cabto, haddii kuleylka markaa paracetamol. Faytamiin C, Bcomplex.
3. Wuxuu kuqeexan yahay sanbabada- qufac iyo neefsasho 4 ilaa 5 maalmood. (Faytamiin C, B kakooban, luqluqashada biyaha kulul, oximeter, paracetamol, silsilad haddii ay daran tahay, dareere badan ayaa loo baahan yahay, jimicsi neefsasho qoto dheer).
Marxaladda goorta loo dhowaanayo isbitaalka:La soco heerka oksijiinta. Haddii uu ka hooseeyo 92 (caadi 98-100) markaa waxaad u baahan tahay silsilad oksijiin ah. Haddii laga heli karo guriga, markaa cosbitaal kale ma qirayo.* Caafimaadkaaga ahaw, Ammaan ahaada! * Fadlan u sii gudbi dhammaan liiska xiriirkaaga. Marna ma ogaan doontid cidda ay ku caawin karto.
Talo bixin ka socota isbitaalada go’doominta gudaha, waxaan ku sameyn karnaa guriga Daawooyinka lagu qaado isbitaalada go’doominta
1. Faytamiin C-1000
2. Faytamiin E (E)
3. Laga bilaabo (10 ilaa 11) saacadood, fadhiisashada qorraxda illaa 15-20 daqiiqo.
4. Cunto ukunta hal mar ..
5. Waxaan qaadanaa nasasho / hurdo ugu yaraan 7-8 saacadood
6. Waxaan cabnaa 1.5 litir oo biyo ah maalin kasta
7. Cunnooyinka oo dhami waa inay diirimaad noqdaan (ma aha kuwo qabow).
Taasina waa waxa kaliya ee aan ku sameyno isbitaalka si aan u xoojino nidaamka difaaca jirka Ogsoonow in pH-ka coronavirus uu ku kala duwan yahay 5.5 ilaa 8.5 Sidaa darteed, waxa kaliya ee inala gudboon si looga takhaluso fayrasku waa in la cuno cuntooyin alkaliin badan leh oo ka sarreeya heerka aashitada fayraska.
cagaaran – 9.9 pH
Liinta Jaalaha ah – 8.2 pH
Avokado – 15.6 pH *
Cambaha – 8.7 pH *
Tangerine – 8.5 pH *
Cananaaska – 12.7 pH *
Biyaha-biyoodka – 22.7 pH *
Sidee loo ogaadaa inaad qabtid fayraska loo yaqaan ‘corona virus’?
1. Cun cun cun
2. Cune qallalan
3. Qufac qallalan
4. Heer kulka
5. Neefta oo ku qabata
6. Urka oo kaa yaraada ….
Liin dhanaanta biyo diirranna waxay baabi’isaa fayraska bilowga kahor intaysan gaarin sambabaha … Ha ku xafidin macluumaadkaan. Sii dhammaan qoyskaaga iyo asxaabtaada.
Wasiirka Horumarinta Caafimaadka Somaliland oo ka Warbixiyey Xaaladda Caafimaadka ee Dalka